हामीले के खान्छौँ ? यी खानेकुरा सँगै मिसाएर खाँदा बढी लाभदायक - शैली न्युज
हामीले के खान्छौँ ? यी खानेकुरा सँगै मिसाएर खाँदा बढी लाभदायक
२२ मंसिर २०७६, आईतवार १०:४१
मङ्सिर । हामीले के खान्छौँ भन्नेले मात्र नभइ कुन खानेकुरासँग के खान्छौँ भन्ने पनि स्वास्थ्यका हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि केही खानेकुरा एकसाथ खाँदा हाम्रो शरीरले बढी मात्रामा पोषक तत्वहरु प्राप्त गर्दछ ।
उदाहरणका लागि स्ट्रबेरी फलसँग साग खानु अत्यन्तै लाभदायी मानिन्छ । हाम्रो पेटको पिएचले सागपातमा हुने आइरनलाई सोस्न कठिन बनाइरहेको हुन्छ । त्यसैले भिटमिन सी सेवन गर्नुले ठूलो मद्दत गर्न सक्छ ।
भिटामिन सीको एसिडिटीले आइरनलाई सजिलै सोस्न सकिने तत्वमा परिणत गराइदिन्छ । जस्तै केबल १०० मिलिग्राम भिटामिन सीले मात्र पनि आइरन सोस्न सक्ने क्षमतालाई ४ गुणाले बढाइदिन्छ । सँगसँगै खानुपर्ने अर्को खानेकुरा हो कालो सिमी र रातो क्याप्सिकम ।
त्यसैगरी अण्डासँग काँचो तरकारी खानु पनि स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै फाइदाकारक साबित हुन्छ । काँचो तरकारीहरुमा रोगहरुसँग लड्न मद्दत गर्ने ‘केरोटेनोइड्स’ तत्व पाइन्छ । र, सो तत्व हाम्रो शरीरले सजिलै सोस्न सक्दैन ।
यस्तोमा अण्डाको पहेँलो भागले तिनलाई पचाउन र शरीरलाई धेरै भन्दा धेरै पोषक तत्व लिन मद्दत गर्दछ । काँचो तरकारीसँग तीनवटा पकाएको अण्डा सेवन गर्दा तीन गुणा बढी कारोटेनोइड्स सोस्न सकिन्छ ।
यसैगरी बेसार र मरिच पनि एकसाथ सेवन गर्नुले अधिक फाइदा गराउन सक्छ । बेसारमा एउटा ‘कर्क्युमिन’ नामक पिगमेन्ट हुन्छ । अध्ययनका अनुसार करक्युनिमले मस्तिष्क, मुटु, फोक्सो र पाचन सम्बन्धी रोगहरु ठीक गर्न र तिनीहरुबाट जोगाउन पनि सक्छ । त्यस्तै यसले स्व–प्रतिरक्षित अर्थात ‘अटोइम्युन’ र घातक संक्रमणबाट पनि बचाउँछ ।
तर हाम्रो पेटलाई कर्क्युमिन सोस्नमा एकदम कठिनाइ हुने गर्दछ । यसको समाधानमा मरिच ठूलो सहयोगी हुन सक्छ । एक अनुसन्धानमा केबल २० मिलीग्राम मरिच २ ग्राम कर्क्युमिनमा मिसाउनाले शरीरमा उपलब्ध कर्क्युमिनको मात्रा २ हजार प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने पाइएको हो । तर अधिक धेरै कर्क्युमिनले किड्नी स्टोनको जोखिम बढाउन सक्छ ।
यसैगरी सागसब्जी र काँचो फलफुलको सलाद खाँदा त्यसमाथिबाट अलिभ ओयललगायत तेल राख्नुले हामीलाई अतिरिक्त मात्रामा स्वस्थकर फ्याट प्रदान गर्न सकछ । यसले सलादको क्यारोटेनोइड बढी भन्दा बढी सोस्नमा मद्दत गर्दछ ।
मासु र रोजमेरीलाई पनि पोषण तत्वका आधारमा मिसाएर खाँदा सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । मासुलाई उच्च तापमानमा पकाउँदा त्यसले ‘हेटेरोसाइक्लिक एमाइन्स’ विकसित गराउँछ जसमा क्यान्सर पैदा गर्न सक्ने तत्व रहेको केही अध्ययनले देखाएका छन् ।
तर रोजमेरीमा हुने एन्टिअक्सिडेन्टले हेटेरो साइक्लिक एमानन्सबाट बचाउन सक्छ । मासु पाक्नु अगाडि रोजमेरी थप्नुले ५० देखि ९० प्रतिशत सम्म हानिकारक तत्वलाई कम गराउन सक्छ । सखरखन्डा र साग पनि एकसाथ खाँदा बढी फाइदा हुने बताइएको छ ।
सखरखन्डामा अधिक मात्रामा भिटमिन ए पाइन्छ । तर हाम्रो शरीरलाई भिटमिन ए लाई रगतसम्म पुर्याउन जिङ्कको आवश्यक पर्दछ ।अध्ययनका अनुसार शरीरमा कम जिङ्क भएका मानिसहरुको कलेजोले अन्यको तुलनामा भिटामिन ए उत्सर्जन गर्न सक्दैन ।
त्यसैले पनि सखरखण्डसँग धेरै मात्रामा जिङ्क भएका खानेकुरा खानुपर्छ । बिजनेस इन्साइडरबाट
आफ्नो परमाणु परीक्षण केन्द्रबाट उत्तर कोरियाले गर्‍यो ‘अति महत्वपूर्ण परीक्षण’
संसारको यस्तो ठाउँः जहाँ बिहेका लागि मोटी युवती नै चाहिन्छ !
नेविसंघका नेता नवराज त्रिपाठीसहित ६ जना पक्राउ
देउवाविरुद्ध काँग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले विरोधपत्र आज बुझाउने
योपालिको बडादसैँका लागि सानिमा बैंकको निशुल्क क्रेडिट कार्ड
ला लिगा नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा ग्रानडा एट्लेटिको म्याड्रिडसंग पराजित
नेपालले इजरायली प्रविधियुक्त बागवानी केन्द्र स्थापना गर्ने
सत्तारुढ नेकपाको भागबन्डा मिलाउनका लागि ३ मन्त्रालय टुक्रयाइने
टेकुमा पिसिआर परीक्षण गराउन आउने सर्वसाधारणको भीड
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:४४
यो वर्षको पद्मश्री साहित्य पुरस्कार र पद्मश्री साधना सम्मान रद्द
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:४१
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:३६
‘गुगल मिट’ अब एक घण्टा मात्रै निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:३१
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:२५
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:१०
पहिरोले अवरुद्ध बेनी–बागलुङ सडक तीन महीनापछि सञ्चालन आयो
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:२९